Denzel Washington Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Facts
Svondo, Ndira 10, 2021
musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Denzel Washington Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemutambi weAmerica ane zita rezita "D". Yedu yeDenzel Washington Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza iwe nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake maitiro uye anesimba zvesimba. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Denzel Washington's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Denzel Washington Hupenyu Hwepashure uye Mhuri Yemhuri:
Akakurumbira mutambi uye director Denzel Hayes Washington Jr akaberekwa pazuva re28th raDecember 1954 kuGomo reVernon muNew York US Iye ndiye wechipiri wevana vatatu akazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Lennis Washington nababa vake, Denzel H Washington Sr.
Mugadziri ane mukurumbira wemufirimu werudzi rweAmerica ane mhuri yemhuri inoburitsa pachena kuti ndewevanhu vatema nedzinza reAfro American. Chii chimwe? Wechidiki Denzel akarererwa mumhuri yepakati-yemhuri kumashure kweguta reMount Vernon muNew York kwaakakurira pamwe nasisi vake mukuru, Lorice nemunin'ina - David.
Kukura paGomo reVernon, Denzel aive mwana ane huipi aigaro kuwanikwa mukambani yevana yaiita kunetsa. Muchokwadi, hukama hwake hwepamoyo hwepakutanga hwaive hunopesana nehunhu hwemhuri yake, kunyanya iya yababa vake vaive mushumiri wePentekosti akagadzwa.
Denzel Washington Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Panguva iyo Denzel aive 9th-giredhi mudzidzi wePennington-Grimes Elementary Chikoro muMount Vernon, zvakashata zvevezera ravo zvainge zvatomutorera iye zvekuti amai vake Lennis vakanzwa kuda kuramba kuchimuponesa kubva pakuva "muputi akakodzera". Kusvika izvozvi, akave nechokwadi chekuendeswa kwaDenzel kuchikoro chega chega chekugadzirira chinonzi Oakland Military Academy muNew Windsor New York.
Mumashure medzidzo yekudzidzira akaona Denzel achipinda Mainland High School muFlorida uko akatanga kufarira The Arts kunyanya mutambo. Nekuda kweizvozvo, anosarudza kudzidza Mutambo weDrama uye Nhau paFordham University kwaakapedza kudzidza muna 1977.
Paakapedza kudzidza, Denzel akashanda muchidimbu semutungamiriri wehunyanzvi pamusasa wehusiku wezhizha muConnecticut uko mumwe waanoshanda naye akacherekedza maitiro ake anoshamisa uye akakurudzira kuti aedze kuita. Nekudaro, Denzel - uyo aimbove akarasika nezvesarudzo yedzakanyanya - akadzokera kuFordham University kunodzidza achidzidzira paLincoln Center kambasi.
Panguva Denzel zvaive, akagamuchira chinzvimbo chemusoro muEugene O'Neill's Emperor Jones uye Shakespeare's Othello. Mushure meizvozvo akadzidza kuAmerican Conservatory Theatre muSan Francisco, California kwegore asati adzokera kuNew York kunotanga basa rake rekuita.
Denzel Washington Road To Fame Nyaya:
Rwendo rwekuita nyanzvi yekutamba runotanga nema Auditions, zvakasarudzika kuna Denzel, akakundikana kuongorora kwake kwekutanga paBroadway Theatre. Zvakaitika izvi zvaive zvisingafadze zvekuti Denzel airarama kuzvirondedzera 30 makore gare gare paakapa ake “Kukundikana Kutaura”.
Achitora zvanga zvasara zveremangwana rake mukuita, Denzel akawana mashoma ekubhadhara mari mune mamwe maTV uye mapurogiramu asati azopedzisira aita Hollywood muvhi yemafirimu 'Carbon Copy' (1981) ichiteverwa 'neRisense yekuuraya' ( 1982).
Denzel Washington Rise To Fame Nyaya:
Pamusoro pegumi regumi rinotevera, Denzel akaonekwa mumafirimu mazhinji senge 'A Soldier Story' (1984), 'Power' (1986) uye 'The Mighty Quinn' (1989). Hazvina kutora nguva refu asati awana budiriro yake yekutanga yebasa rake rekuhwina mubairo saPasiras Silas mumutambo wehondo firimu 'Kubwinya' (1989).
Iye panguva iyoyo achikwira nekukurumidza mutambi akasimbisa kubudirira kwake kwekutanga nekutamba chinzvimbo chezita 'Malcolm X' (1992). Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Denzel ari more wemuvhi director uye mugadziri uyo anozivikanwa nekubudirira kwake kwakaringana mubhokisi hofisi. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Denzel Washington Hukama Hupenyu:
Unoziva here kuti Denzel Washington ave akaroora kweanoshamisa makore makumi matatu nemashanu? Uye zvakare, akange asina shamwari dzevasikana dzakasimbiswa asati asangana nemukadzi akazova mukadzi wake - Pauletta Washington. Denzel akasangana naPauletta muna 35, pane seti yemuvhi yeTV Wilma. Vakatanga kudanana mushure uye ndokuenderera mberi nekuroora musi wa 1977 Chikumi 25.
Vakaroorana vane mukurumbira vane vana vana vari kuzvisimbisa muindasitiri yemamuvhi. Ivo vanosanganisira John David uyo akatamba nyeredzi muSpike Lee's Oscar-akasarudzwa BlacKkKlansman. Mwana wavo wechipiri Katia mutambi wepamitambo apo mapatya Olivia naMalcolm vari kutanga ravo basa mu showbiz panguva yekunyora iyi bio.
Denzel Washington Hupenyu Hwemhuri:
Mhuri ndipo panotangira hupenyu uye apo rudo haruperi kuna Denzel Washington. Tinokuunzira chokwadi chehupenyu hwemhuri yake kutanga nevabereki vake.
Nezve baba vaDenzel Washington:
Denzel Hayes Washington Sr aive baba vaDenzel. Akazvarwa muna 1909 kuBuckingham County muVirginia uye akashanda nenzira yake yekuve mushumiri wePentekosti akagadzwa. Denzel Sr uyo aive nebasa renhoroondo yekuve mushandi weNew York City Water department aizivikanwawo kuti akashanda kuchitoro cheS S. Klein. Akafa muna 1991 pazera raive nemakore makumi mapfumbamwe nemana.
Nezve amai vaDenzel Washington:
Lennis Washington ndiamai vaDenzel. Iye aimbove mushandi wekunaka uyo akarambana nababa vaDenzel aine makore gumi nemana chete ekuberekwa. Lennis ane hukama hwakanaka kwazvo naDenzel uyo anomurumbidza nekushanda nesimba kuchengetedza mari kuti amuendese kuchikoro chega chekugadzirira, sarudzo isina kungomuchengetedza kubva padambudziko asi kuumba ramangwana rake.
Nezve hama dzaDenzel Washington:
Denzel Washington ane vakoma vaviri vanozivikanwa zvishoma nezve panguva yekunyora. Ivo vanosanganisira hanzvadzi yake mukuru Lorice uye mukoma David. Maitiro atinozviita, vana vaviri vaviri vagara nehupenyu hwepamoyo asi vachidada naDenzel uyo akaita zita ravo remhuri rakakodzera kuverengerwa naro.
About hama dzaDenzel Washington:
Achifambira mberi kubva kuhupenyu hwemhuri hwaDenzel Washington, sekuru nasekuru vake vaive William Washington neVirginia peji apo sekuru vake naambuya vake vaive Tilman Lowe naEliza Jackson. Iko hakuna zvinyorwa zveababamunini vaDenzel nasekuru vake apo babamunini vake, babamunini pamwe nababamunini vasati vachazozivikanwa panguva yekunyora.
Taura nezvehunhu hwaDenzel Washington, ane chimiro chinotonhorera chinoratidza kushanda nesimba uye kushivirira kwevanhu vanotungamirwa nechiratidzo cheCapricorn Zodiac. Uye zvakare, Denzel ane chivimbo, anoshanda, akarongeka uye anoongorora.
Mutungamiriri wemufirimu uyo ​​asinganyatso kuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwevanhu uye hwakavanzika ane zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinechekuita nekuchengeta basketball nemitambo yemabhokisi, achibika uye kupedza nguva aine shamwari nehama.
Iwe unoziva here kuti Denzel Washington ine mutengo unoshamisa waikosha madhora mazana maviri nemaviri emadhora panguva yekunyora? Akawana hupfumi hwakakura kubva pamakore makumi mana ebasa rake muindasitiri yemabhaisikopo kuratidza kuti mutambi anobatsira sei kune chero ani zvake ane matarenda anoenderana neyake.
Nepfuma huru inouya hupenyu hwoumbozha hwaive husina kumbobvira hwaregwa neDenzel sekugara nemhuri yake kuimba yakapamhama uye yakasununguka munharaunda yeGos Angeles, California. Kunyangwe Denzel aine chikoro chekare kubata kumunhu wake anofarira zvikuru kuve neRoll Royce yemazuva ano kumota dzemuchando.
Denzel Washington Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Denzel Washington Childhood nyaya uye biography tarisa mashoma-anozivikanwa kana Untold chokwadi nezvake.
Mutambi wemufirimu anozvibatanidza zvakasimba nemasangano anobatsira nekubatsira vana vemuAfrica varombo uye nekupa mari kunotora mari kumasangano akaita saNelson Mandela Children's Fund neSave Africa's Children.
Denzel muKristu ane hukama hwakasimba naMwari. Iye mukurumbira wefirimu director akambove nechishuwo chinopisa chekuve muparidzi sababa vake vanonoka. Chiizve? Mu1995 Denzel yakapa US $ 2.5 mamirioni kuti ibatsire kuvaka West Angeles itsva.
Kusvuta uye kunwa:
Denzell Washington haaputi fodya panguva yekunyora. Kunyangwe iye mutungamiriri wemamuvhi aiputa fodya paaive mudiki. Iye anonzi akarega kuputa kupfuura 20 makore apfuura. Zvisinei, iye anopiwa kunwa zvinwiwa zvinodhaka asi zvine mwero.
Denzell Washington haana kana tattoo rimwe chete pamuviri wake kana kumbofunga nezvekutora rimwe. Mutambi wekare anomira pakakwirira pakakwirira ye1.85m ndeyenhabvu yevavaraidzo vanokoshesa-pfuma yevhidhiyo yezvinyorwa pamusoro pekushongedza kwemuviri.
Thanks for reading vedu Denzel Washington Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Mel Gibson Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 14, 2020
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts
Johnny Depp Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 16, 2020